Mpandraharaha : « Tsy mety intsony ny fihibohana » | NewsMada
Mpandraharaha : « Tsy mety intsony ny fihibohana »
Tampoka aty amin’ny tany mahantra na an-dalam-pandrosoana izao krizy ara-pahasalamana miantraika mafy amin’ny toekarena izao, tsy mitovy tamin’ny krizy ny taona 2008, raha ny fanazavan’ny Banky iraisam-pirenena.
Mila mandray fepetra ara-pahasalamana sy ara-toekarena haingana ny fanjakana any amin’ireo firenena ireo hiatrehana izao krizy izao. Eto Madagasikara, maro ny mpandraharaha sy olon-tsotra milaza fa tsy mety intsony ny hanohizana ny fihibohana. Toekarena potika no tambin’izany, nefa ny fanjakana tsy antenaina hanampy ny sehatra tsy miankina.
Amin’ity taona 2020 ity ny krizy ara-toekarena goavana indrindra taorian’ny Ady lehibe faharoa, araka ny tatitra navoakan’ny Banky iraisam-pirenena (BM). Na any amin’ireo firenena lazaina ho matanjaka aza, hihena 7 % ny fihodin’ny toekarena any amin’izy ireo noho ny fikorontanan’ny tolotra sy ny tinady eo amin’ny varotra, tsy fandehanan’ny asan’ny orinasa mpamokatra maro, fizahantany, fitaterana, samy mandalo krizy daholo. Nam­baran’ny Banky iraisam-pirenena fa na ny asan’ireo orinasa vaventy miasa any amin’ny tany mahantra aza, mbola tsy ho tafarina amin’ity taona ity. Voamarin izany ny amin’ny asan’ny Ambatovy eto Madagasikara.
Tsy hisy ny fisondrotry ny harinkarena faobe, hihena 3,6 % koa ny fidiram-bola isam-batan’olona. Salanisa ankapobeny io fa mety hihena maherin’ny 10 % ny fidiram-bola isan’olona any amin’ny tany mahantra. Voaporofo izany noho ny fahaverezan’ny asa mahakasika mpiasa anetsiny maro. Tsy hampisy fiantraikany loatra eo amin’izay krizy izay, manaiky ny mpiasa amina orinasa sasany any Eoropa ny fampihenana karama manodidina ny 10 %. Mampihatra izany, ohatra, ireo mpanamory fiaramanidina ao amin’ny British­airways.